Ukunxibelelana nendlela yakho eya empumelelweni | Martech Zone
Ukunxibelelana nendlela yakho eya empumelelweni
NgoLwesihlanu, Matshi 12, 2010 NgeCawa, Agasti 19, 2012 U-Ellen Dunnigan
Ogqirha balungiselela ngengqondo utyando. Iimbaleki zilungiselela ngengqondo umdlalo omkhulu. Nawe, kufuneka ube nengqondo malunga nethuba lakho elilandelayo, eyona ntengiso yakho iphambili okanye intetho.
Ukuphuhlisa izakhono zonxibelelwano ezinkulu iyakucacisa ngaphandle kwepakethi. Cinga ngeziphi izakhono ozifunayo:
Iindlela zobuchule zokuphulaphula - Ngaba uyazi ngokwenene ukuba umthengi wakho ufuna ntoni kwaye ngoba? Yintoni intlungu yakhe? Ngaba uyayiva kule nto ayithethayo nakwindlela athetha ngayo?
Ukuseta uLwimi loMzimba -Ulazi ixesha lokuzibonakalisa kulwimi lomthengi wakho? Ngaba ulwimi lwakho lomzimba luseta ithoni yonxibelelwano olungcono okanye oluqhelekileyo kunye nomthengi wakho?
Ukuchazwa ngokuLungileyo kunye neRhafu yeNtetho Ngaba indlela othetha ngayo ikhuthaza amandla kunye nezenzo kumthengi wakho? Okanye ngaba ufumanisa ukuba umthengi wakho uyaphambukela kwezinye izihloko okanye uyakruquka yimveliso / inkonzo yakho? Ngaba umthengi uthole ukuba imveliso okanye inkonzo yakho isombulula iintlungu zakhe?
UkuLawulwa kwelizwi okuNamandla, okuKhokelela - Ngaba uvakala ngathi unefuthe? Ngaba ilizwi lakho libenza abantu bakhululeke ukuze bavulele ngokukhululekileyo kuwe malunga nentlungu yabo? Okanye ngaba uvakala ngathi uxhalabile, usoyika, awulungelelananga, uyangxola, uyacotha, okanye uyadika?
Sele uyazi umyalezo ofuna ukuwuva umthengi wakho. Leyo yinxalenye elula. Kwaye nokuba uyithetha kangaphi i-pitch yakho yemizuzwana engama-60 okanye uye kwizinto zakho zentengiso, kukho abantu abangazukunxibelelana naloo myalezo; ngekhe nje yifumane. Esinye sezizathu kungenxa yokuba, ngokubanzi, umyalezo wakho uya kuvakala kuphela xa UTHETHA NJANI kwaye uyitsho njani.
UTHETHA njani umyalezo wakho wenza umahluko omkhulu
Kwaye kukho ubugcisa kule nto. Ngaphambi kokuba uye kule fowuni inkulu, cinga ngemvakalelo ofuna ukuyishiya nomthengi wakho; imvakalelo ofuna ukwabelana ngayo. Umzekelo, cinga ukuba ungafuna ukuqala ngomyalezo oshushu, onobuhlobo kwaye ulandele umyalezo wokuzithemba, onamandla, okanye onempembelelo.
Imvakalelo nganye ofuna ukuyidlulisa ingaboniswa ngu
Umfanekiso wengqondo okanye umfanekiso
Ukutshatisa ulwimi lomzimba
Lungiselela umnxeba wakho ngokuqinisekisa ukuba indlela yakho yonxibelelwano (INDLELA) ehambelana nomyalezo wakho. Ukuqala ngomyalezo ofudumeleyo, onobuhlobo:
Cinga ngegama eliphambili elivusa imvakalelo efudumeleyo, enobuhlobo: ithenda, ukuzola, ukukhanya kwelanga, ukuphola. Phinda elo gama linye liphambili kuwe izihlandlo ezininzi ugxininisa de ube uziva.
Yiba nomfanekiso ngqondweni womfanekiso ngqondweni. Yiba nomfanekiso ngqondweni wokuwola umntwana okanye iqabane lakho, ulisongele ngengubo eziko, uhamba unxweme elangeni eliqaqambileyo. Yenza umfanekiso ucace kwaye ucace.
Guqula isandi selizwi lakho ngokutshintsha ithoni yomzimba kunye nokubekwa kwakho. Ncuma. Thetha ngokucacileyo ngamandla. Hambisa. Yenza intshukumo yakho ibe Nkulu.
Ukuqhubeka ngamandla nefuthe:
Cinga ngegama eliphambili elivelisa amandla kunye nefuthe: yomelele, yomelele, izithembile
Yiba nomfanekiso-ngqondweni wakho ukuloo ndlela. Khawufane ucinge ukuba ungoyena mntu ubalisa elona bali, okanye omkhulu kubo bonke abaqeqeshi, umphathi-mpahla onxibe iyunifomu, INGCALI ethetha nabaphulaphuli inamathele kuwo onke amagama akho. Ngoku zibone unika umyalezo wakho. Yiba nomfanekiso wakho uzolile, ulawula, kwindawo.
Ulwimi lomzimba: Ukuba ufuna ukuba namandla kunye nefuthe, yima. Ukuma ngokugqibeleleyo. Sebenzisa izimbo zomzimba ezomeleleyo. Musa ukuhambahamba kakhulu. Mjonge kakuhle. Sukujonga izinto ezisegumbini; ngabantu kuphela. Xa uthetha emnxebeni, musa ukuvumela amehlo akho abhadule. Mjonge emehlweni nomfanekiso womntu… thetha naye.
tags: Uphando lwezoPhando
Ukugxininisa kwishishini umseki kunye ne-CEO u-Ellen Dunnigan ngumqeqeshi owaziwayo kwilizwe lonke noqinisekisiweyo ngoqeqesho olukhethekileyo kwilizwi, intetho, kunye nokuphuculwa kwesiNgesi. Unesidanga se-Speech-Language Pathology kwaye uqinisekisiwe njengoklinikhi efanelekileyo yi-American Speech-Language Hearing Association.
Imithombo yeNtengiso yezeNtlalontle imalunga neNtlalo, hayi iMithombo yeendaba
Sukuvumela Iphulo Lakho Lokurhola Libe Kukungcungcuthekiswa Kwamanzi eTshayina